प्रकृति र अध्यात्मको दोभान-टोड्के | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home म्याग्दी समाचार मंगला गाउँपालिका प्रकृति र अध्यात्मको दोभान-टोड्के
प्रकृति र अध्यात्मको दोभान-टोड्के
२०७६, २८ चैत्र शुक्रबार १८:२८
म्याग्दीको एउटा सुन्दर पहाडी थुम्को (२,४०० मिटर) । प्रकृति र अध्यात्मको दोभान । शान्त वातावरण, दूधे हिमाल र शितल वतासले सबैलाई मोहित तुल्याउँछ ।
डाँडाबाट गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धौलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे« र लमजुङ हिमाल छर्लङ्ग देखिन्छन् । बिहान, दिउँसो र बेलुकीपख हिमालको सौन्दर्य फरकफरक देखिन्छ । बिहान सूर्यको लाली पर्दा र साँझ घाम डुब्दा रंगीन बन्छन् हिमालहरू ।
टोड्केको रोमाण्टिक वातावरणमा तन र मन रिचार्ज हुन्छ । ऊर्जा बढ्छ । हिमाली मुस्कान, चराको चिरबिर र वनजंगलको हरियालीले लठ्ठै बनाउँछ । यहाँ बर्सात्मा भुइँकुहिरोले लुकामारी खेल्छ । पुस–माघमा हिउँ पर्छ । फागुन–चैतमा लालीगुराँसको बैंस चढ्छ । त्यतिवेला मन उज्यालो बन्छ ।
टोड्केलाई योग र ध्यान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । आध्यात्मिक हिसाबले टोड्के क्षेत्रको ठूलो महत्व छ । पुराणहरूमा कालाञ्जर पर्वतलाई पावन भूमिका रुपमा वर्णन गरिएको छ । टोड्के पनि कालाञ्जर क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँ स्वर्गद्वारी महाप्रभु लगायत धेरैले तपस्या गरेका थिए । डाँडामा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय आश्रम’ र सिद्धथान पनि छन् ।
म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका र मंगला गाउँपालिकाको संगममा अवस्थित छ टोड्के । टोड्केको काखमा सुन्दर गाउँहरू छन् । पूर्वोत्तर दिशामा झीँ, पूर्वमा वाखेत, दक्षिणपश्चिममा पूर्णगाउँ र पश्चिममा कुहुँगाउँ छन् । मगर बाहुल्य गाउँमा होमस्टे सुविधा पाइन्छ ।
डाँडाको नाम टोड्के रहनुमा रोचक कथा छ । उहिल्यै डाँडामा गाइडिँगा चराइन्थ्यो । त्यहाँको एउटा टोड्को (सुरुङ)मा गाईबाख्रा खस्थे । तिनलाई बाघ भालुले खाइदिन्थे । त्यसैले डाँडालाई टोड्को भएको ठाउँ भन्न थालियो । पछि अपभं्रस भएर टोड्के भनियो ।
दुई रात बसेर टोड्केमा रमाउन सकिन्छ । मधुमास मनाउनेलाई टोड्के उत्तम गन्तव्य बन्न सक्छ । यसलाई ‘हनिमुन डेष्टिनेशन’का रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने कि ! टोड्के आफैंमा रोमाञ्चक गन्तव्य हो । डाँडामा ‘टोड्के हिल रिसोर्ट’ खुलेको छ ।
टोड्केका पर्यटन अभियन्ता भीम शेरचनका अनुसार प्याकेजमा आउने पाहुनालाई रिसोर्टले बेनीदेखि टोड्केसम्म सवारी साधनको व्यवस्था गर्छ । टोड्केमा आज एउटा रिसोर्ट छ, भोली अरु पनि खुल्नेछन् । टोड्केको पर्यटन विकाससँगै काखका गाउँको पनि कायाकल्प हुनेछ ।
एउटा सुझाब : टोड्के यात्रामा निस्किँदा बेनीबजारबाट ९ किमि पश्चिमको सिँगाको प्राकृतिक तातोपानीमा डुबुल्की मार्न नछुटाउनुस् है !
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–बेनी २८२ किमि, बसमा १० घन्टा । अथवा काठमाडौं–पोखरा हवाई यात्रा २५ मिनेट । पोखरा–बेनी ८२ किमि, बसमा ३ घन्टा । बेनीबाट टोड्केसम्म पदयात्रा गर्न ८ घन्टा लाग्छ । बेनीबाट गाडिमा टोड्के पुग्ने ४ वटा सडक छन् । सडक मार्गबाट जिप तथा मोटरबाइकमा पुग्न सकिन्छ । बेनीबाट जिपमा टोड्के पुग्न दुई घन्टा लाग्छ । Source: barnanmedia.com
Previous articleस्वास्थ्य स्थिति बुझ्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ बेनीमा
Next articleकोरोना आशंका गरिएका एक यूवाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’